शिक्षण पेशासँगै कृषिमा रमाउँदै रेग्मी - Internet Khabar
कुश्मा, १८ मङ्सिर । मानिस व्यस्त रहनु नै उसको सफलताको शुरुआत हो । शिक्षण पेशाबाट मात्र नभएर बिहान बेलुकाको समय कृषि पेशामा रमाउन थाल्नुभएका शिक्षक रामकृष्ण रेग्मी शिक्षण पेशाबाट मात्र तृप्त हुन सक्नु भएन । उहाँले जीवनलाई सार्थक बनाउन र आर्थिकरुपमा समृद्ध बन्दै परिवारको भविष्य थप सुनिश्चित गर्न कृषिलाई पनि सँगसँगै लैजाने निधो गर्नुभयो ।
फलेवास नगरपालिका–३ रुग्दीका कृषक रामकृष्ण रेग्मीकोे बारीमा हरेक मौसममा लटरम्म गोलभेँडा र मौसमअनुसारका तरकारी फलेका हुन्छन् । मौसमअनुसार खुला ठाउँमा र हिउँमा प्लाष्टिकको घर बनाएर उहाँले तरकारी फलाउने गर्नुभएको छ । आफ्नै गाउँ नजिकैको निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका रेग्मी बिहान र बेलुकाको समय बारीमै तरकारी गोडमेलमा ब्यस्त भेटिनु हुन्छ । बारीमा काउली, गोलभेंडाजस्ता तरकारी हुर्किरहेका छन् ।
तरकारीको गोडमेल गर्नु उहाँको साँझ बिहानको दिनचर्चा जस्तै बनेको छ । उहाँ शिक्षकको अतिरिक्त तरकारी कृषक मात्र नभएर पोल्टी फार्म र गाउँकै होलसेल किराना पसल गर्ने एक व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ ।
शिक्षण पेशाबाट आफूले घरपरिबार तथा छोराछोरीलाई पढाउन समेत धौ धौ हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले अहिले आफ्नो परिवार धान्न तथा घर खर्च चलाउन सहज हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो । पछिल्लो सात वर्षयता उहाँको परिवारले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेको छ ।
खर्च कटाएर कृषिबाटै वर्षको तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ रेग्मी परिवारले । घरमै तरकारी खेती र पोल्टी फार्म राम्रो हुँदै गएपछि उहाँको परिवार अहिले एकदमै खुशीसमेत बनेको छ । उहाँको परिवारमा छोटो समयमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । रेग्मीको परिवारले ल्याएकोे यो परिवर्तनले अहिले रेग्मीको घरमा मात्र नभएर शङ्करपोखरी रुग्दीका हजारभन्दा धेरै किसानको घरमा यस्तै परिवर्तन आउन थालेको छ । विदेश गएर फर्केकासमेत अहिले कृषिमा होस् या पशुपालन व्यवसाय सबै आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ अभियानमा जुटेका छन् ।
अहिले उहाँको बारीमा हरियो साग, काउली, बन्दा, टोमाटर केराउलगायतका हरियो सागसब्जी मगमगाइरहेका छन् । उहाँले विदेशिन युवालाई लक्षित गर्दै आफूले गाउँमा कृषि क्रान्तिको शुरुआत गरेको बताउनुभयो । झण्डै ७० प्रतिशत तरकारी बारीबाटै बिक्री हुने भए पनि बाँकी तरकारी उनले सदरमुकाममा लगेर बेच्दै आउने गरेको बताउनु हुन्छ ।
रेग्मीका अनुसार अहिले उहाँको तरकारीबाहेक पोल्टी फार्म तथा किराना व्यवसायबाट मात्रै महीनाको रु एक लाखदेखि दुई लाखको हाराहारीमा कमाइ हुन्छ । जसमध्ये खर्च कटाएर सिजनमा रु एकलाखसम्म बचत हुन थालेको छ । रासस
कारागारबाट छुटाइदिने लोभ देखाई बलात्कार र लाखौँ ठगी, एक नेता पक्राउ
कुन देशको रेट कति ? हेर्नुहोस आजको विनिमयदर
अलैँचीको भनेजस्तो भाउ नपाएर किसान चिन्तित
पत्याउनु हुन्छ ? पानीमुनी आलु फलाउन व्यस्त रामभरोष